सेनाहरुलाई मेरो प्रश्न देशको सेना हो कि ? राजनीतिक पार्टीहरुको सेना हो ? - Enepalese.com
सेनाहरुलाई मेरो प्रश्न देशको सेना हो कि ? राजनीतिक पार्टीहरुको सेना हो ?
इनेप्लिज २०७७ पुष ५ गते ७:४३ मा प्रकाशित
मुलुकको काठमाडौ उपत्यका लगायतका स्थानहरुमा रहेको सेनाहरुको संगठन भद्रकाली जंगी अड्डा, पृतनाहरु, गणहरु र गुल्महरु मुलुकको सेनाको हो कि ? राजनीतिक दलहरूको सेनाको हो भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ?
राजनीतिक दलहरूको नेताहरूको कारण मुलुकले निकास पाउन सकेको छैन । मुलुकमा जताततै विकृति, बेथिति, अराजकता, ढण्डहीनता बढदै गएको र मुलुकमा लथालिङ्ग अवस्था छ । सेनाहरुले सत्ता कब्जा गर्न ढिलाइ गरेको किन ?
पुष्पकमल दाहालले आफ्नो कार्यकालमा कसैले विरोध नै नगरी एक्कासि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए, प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली समेत केही मन्त्रीहरुले अध्यादेश ल्याए र फेरि त्यही अध्यादेश फिर्ता गर्ने सहमति भएको छ भन्ने कुरा समाचारमा देखियो । पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु, के.पी. शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याउने र फिर्ता गर्ने तथा शेर बहादुर देउवा र अग्नि सापकोटा संवैधानिक परिषदको बैठकमा नजानु जस्ता क्रियाकलाप गरिनु बच्चा बच्चीले घुर्की देखाए जस्तै हो ।
मुलुकमा शीर्ष नेताहरूको रमिता, नाटक मंचन र खेलाची अति भो ? मुलुकको सेना हो भने सेनाहरुले मुलुकको हितमा तत्काल ठोस निर्णय अर्थात कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।